“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल जेठ २ गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल” – Mix Khabar
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल जेठ २ गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य उत्तरायण,ग्रीष्म ऋतुः,परिधावी नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४१,विक्रमसम्वत २०७६ साल जेठ २ गते विहिबार नेपाल सम्बत ११३९ वछलाथ्व,सन् २०१९ मे १६ तारिक शुक्लपक्ष द्वादशी तिथि विहान ७ वजेर ३१ मिनेटसम्म,चित्रा नक्षत्र राती ४ वजेर ८ मिनेटसम्म,सिद्धियोग,बालवकरण,आनन्दादियोग,सूर्य वृष राशीमा,चन्द्रमा अपरान्ह ४ वजेर ३९ मिनेटसम्म कन्या उप्रान्त तुला राशीमा ।
मुहूर्त – शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३३ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२७ वजेसम्म रहनेछ । सामान्य गुली काल मुहूर्तः–विहान ८÷३९ बजेबाट १०÷२० वजेसम्म रहनेछ । अशुभ राहुकाल मुहूर्तः–अपरान्ह १÷४२ वजेबाट ३÷२३ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–विहान ५÷१७ वजेबाट ६÷५८ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ दूरमुहूर्तः–विहान ९÷४५ वजेबाट १०÷३९ वजेसम्म र अपरान्ह ३÷९ वजेबाट ४÷३ वजेसम्म रहनेछ ।
बार वेला – सूर्योदयबाट प्रातः ६÷५८ वजेसम्म शुभ वेला,६÷५८ वजेबाट ८÷३९ वजेसम्म रोग वेला,८÷३९ वजेबाट १०÷२० वजेसम्म उद्वेग वेला,१०÷२० वजेबाट १२÷१ वजेसम्म चर वेला,१२÷१ वजेबाट १÷४२ वजेसम्म लाभ वेला,१÷४२ वजेबाट ३÷२३ वजेसम्म अमृत वेला,३÷२३ वजेबाट ५÷४ वजेसम्म काल वेला र ५÷४ वजेबाट सूर्यास्तसम्म शुभ वेला रहनेछ ।
बार वेला – सूर्यास्तबाट ८÷४ वजेसम्म अमृत वेला,८÷४ वजेबाट ९÷२३ वजेसम्म चर वेला,९÷२३ वजेबाट १०÷४२ वजेसम्म रोग वेला,१०÷४२ वजेबाट १२÷१ वजेसम्म काल वेला,१२÷१ वजेबाट १÷२० वजेसम्म लाभ वेला,१÷२० वजेबाट २÷३९ वजेसम्म उद्वेग वेला,२÷३९ वजेबाट ३÷५८ वजेसम्म शुभ र ३÷५८ वजेबाट सूर्योदयसम्म अमृत वेला रहनेछ । शुभाशुभ
मेषः–कार्य सम्पादनमा केहि कठिनाई हुनेछ । मेहनतपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । आर्थिक उन्नतिका सम्भवाना पनि देखिन्छ । व्यापारमा सुधार आउनेछ । विवादित विषयको टुङ्गो लाग्नेछ ।
वृषः– समयमा विचार विमर्श गरेर काम गर्नु होला अवस्य सफलता मिल्नेछ । अरुको भरमा मात्रै काम गर्नु भयो भने पछि परिनेछ । स्पष्ट मिल्दा आफैलाई घाटा हुनेछ । व्यापारमा सुधार आउनेछ ।
सिंहः– सचेत भएर काम गर्नु होला,विना उपलब्धिका काममा धन र श्रम लगानी हुनसक्छ । दैनिक कामले निरन्तरता पाउनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । धन नदिनु होला ।
कन्याः– काम गर्ने उत्साहामा वृद्धि हुनेछ । अधुरा काम सम्पादन हुनेछन् । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिनको लागि निम्ता आउन सक्छ । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्ला ।
वृश्चिकः– मन मस्तिष्कमा नयाँ नयाँ विचारको जन्म हुनेछ । आस्था र विश्वास बढ्नेछ । घर परिवारबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसरको झिनो सम्भावना देखिन्छ । काममा ढिला नगर्नु होला ।
धनुः–राज्य सँग सरोकार रहेका विषयले प्राथमिकता नपाए पनि आफ्ना कामले गति लिनेछ । लगानी गर्दा भने विचार पु¥याउनु होला । भयातुरमा काम नगर्नु होला । व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् ।
मकरः– स्वव्यवसायमा झिनो अवसरको सम्भावना देखिनेछ । आत्मविश्वासका साथ काममा लाग्नु होला । अरुको भर विश्वासमा काम नगर्नुहोला । सामाजिक कामको लागि बाहिर जानु पर्ने हुनसक्छ । आय व्यय बराबरै हुनेछ ।
कुम्भः– समयले कम साथ दिने हुदा जोखिम पूर्ण काममा हात नहाल्नु होला । काम गर्दा समस्या सृजना हुने देखिन्छ । परभावको सम्भावना देखिन्छ । धन सम्पतिको नास हुने सम्भावना त्यति कै देखिन्छ । व्यापार घाटा बढ्नेछ ।
मिनः–समयलाई वुझेर अगाडि बढ्नु होला नत्र पछि परिनेछ । लगनशिल भई समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । काम सरल विधिबाट सम्पादन हुनेछन् । लगानी अनुसारको प्रतिफल मिल्नेछ । व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ ।“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति”।
Posted on: Wednesday, May 15, 2019 Time: 21:17:16